ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများ — Steemit
ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အကျင့်စရိုက်တရားသဖြင့်စီရင်သောပေါ်မှလူ့အဖွဲ့အစည်းအခြေပြုနေဖြင့်သတ်မှတ်တန်ဖိုးများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကလူတစ်ဦးကဤတန်ဖိုးများကို၏အခြေခံပေါ်မှာကောင်းမကောင်းဖြစ်ဟုဆိုသည်။ အသက်တာ၌တစ်ဦးကလူတစ်ဦးရဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသူ / သူမဖြင့်သမုတ်သောဟာကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများအပေါ်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိမှီခိုဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုအမှားအမှန်နှင့်ကောင်းမကောင်းများ၏စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်။ ဤရွေ့ကားသတ်မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများ, လူများသူတို့တစ်တွေငြိမ်းချမ်းသောဘဝကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ရန်အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပြုမူရမယ်ဘယ်လိုအဖြစ်နားလည်ကူညီပေးသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူကလေးဘဝကတည်းကဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သည့်ကိုယ်ကျင့်တရားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်အခြေခံသည်သူ၏အပြုအမူ၏ဂယက်ရိုက်သိတယ်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအချို့သောအတိုင်းအတာအထိလွယ်ကူသောဖြစ်လာသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကျွန်တော်တို့ကိုအသက်တာ၌တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်ပေးပါ။ ကျနော်တို့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာ grounded နေကြသည်ကျနော်တို့ကောင်းသောကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုထမ်းလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်သူတို့အဘို့ကောင်းသောလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြသည်။ အခြားသူတွေကိုကူညီပေးခြင်း, ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်သောသူတို့ကိုပြုစု, အခြားသူများနာကျင်ပညာရှိသဆုံးဖြတ်ချက်များတာမဟုတျဘဲကောင်းသောကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးဥပမာတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ဆောင်ခဲ့အတွက်ကူညီပေးသည်။
အိန္ဒိယ Society မှာကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများ
အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများမြင့်မားသောကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ပေးသည်။ အဆိုပါကလေးဘဝကိုယ်နှိုက်ကနေ, တစ်ဦးချင်းစီကငျြ့တရားမှန်ကန်သောအရာတစ်ဦးထုံးစံ၌ပြုမူရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ သူတို့ဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းနှုန်းအဖြစ်အမှားအမှန်သောအရာကိုသှနျသငျနေကြသည်။ အသက်ကြီးသောသူတို့သည်အတူလေးစားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနုပျိုနေသောသူတို့နှင့်အတူသည်းခံခြင်း, ချစ်ခြင်းနှင့်တကွ Talking ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမသွန်သင်ပထမဦးဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တဦးတည်းလည်းကောင်းတစ်ဦးကိုယ်ကျင့်တရားဇာတ်ကောင်ကိုထမ်းရန်သွန်သင်ထားပါသည်။ အရက်သောက်, ဆေးလိပ်သောက်နှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားလှုပ်ရှားမှုများကျူးလွန်အထူးသဖြင့်မိန်းမများအဘို့အနီးပါးအိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမညီကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ထုံးစံနှင့်အစဉ်အလာဆန့်ကျင်ဖြစ်စဉ်းစားသည်။ အိန္ဒိယတွင်ပြည်သူ့ငျြ့တရားမှန်ကန်သောမဟုတ်သောအရာလမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုနင်းနယ်သောသူတို့နှင့်အတူကျိုးမိသားစုဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့လူသိများခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြိမ်နှင့်ကြီးထွားလာဆွဲဆောင်မှုအတူအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆီသို့ဦးတည်လူများစွာကငျြ့တရားဤသတ်မှတ်ချက်စံချိန်စံညွှန်းအန်တုနေကြသည်။ လူတိုင်းဤသည်နေ့ရက်ကာလသူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းနှင့်တင်းကြပ်သောကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုအသက်ရှင်ဖို့လွတ်လပ်မှုကိုမကြာခဏသူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုထိခိုက်လိုသည်။ လူအတော်များများဟာလွတ်လပ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာလူ့အဖွဲ့အစည်းဆန့်ကျင်သွားပါ။
တစ်ဦးချင်းစီကောင်းသောကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုထမ်းရကြမည်နေစဉ်, တခါတရံသူတို့ကဝေးလွန်းမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ အဆိုပါအတွေးအခေါ်တွေအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်လူနေမှု၏လမ်းနှင့်အတူ, ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများလည်းပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်များနှင့်လည်းတင်းကြပ်မတည်မနေသငျ့ဘူး။
#good-karma #moral #values #life
Congratulations @thwinlay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :